विदेशी सम्बन्धनबाट चलेका कलेज, विद्यार्थीमाथि ब्रह्मलुट
प्राडा विद्यानाथ कोइराला
विदेशी डिग्रीको नाममा नेपालमा सन्चालन भइरहेका विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाले नेपाली शिक्षामा सिर्जना गरेको अवस्था अहिले दयनीय भएको छ । विदेशी डिग्रीको नाममा यस्ता कलेजले अहिले विद्यार्थी ठग्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुमाथि निगरानी गर्नु पर्ने सरोकारवाला निकाय, राज्य वा शिक्षा मन्त्रालय कसैले पनि उचित ध्यान दिन सकेका छैनन् । यता नेपालमा यो कमजोरी छ भने उनीहरुलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले पनि यसबारे ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
यस्तो बदमासीले निम्त्याएको समस्याबारे बारम्बार विज्ञहरुले सुझाव नदिएका पनि होइनन् । तर, अहिलेसम्म कसैले यस्ता सुझाव सुने पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । समस्याहरु समाधान भएका छैनन् ।
अलिक पहिलेको कुरा हो, म विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा थिएँ । त्यति बेला म आफैंले पनि यस्ता शिक्षण संस्थाबारे मैले एउटा विशेष नियम ल्याऔँ भनेको थिएँ । विश्वको र्याङ्किङमा एक हजारभन्दा तल परेका विश्वविद्यालयको मात्रै सम्बन्धन हामीले लिनु ठिक हुन्छ भनेको थिएँ । तर, यो विषयमा त्यति बेला चर्चा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यही भएर अहिले जस्तो पायो त्यस्तो कलेजको, जस्तो पायो त्यस्तो विषयमा सम्बन्धन ल्याएर यहाँका व्यवसायीले लुट मच्चाइरहेका छन् । विद्यार्थीहरु माथि उनीहरुको ठगी चलिरहेको छ ।
अर्को कुरा, हामीले हामीसँग नभएका विषयहरुलाई मात्र सम्बन्धन दिन सकियो भने पनि यो क्षेत्रमा सुधार आउने थियो । हाम्रै विश्वविद्यालयमा भएका विषयहरुको सम्बन्धन लिन नदिऔँ, त्यस्ता कलेज वा विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आउन नदिऔँ । हामीसँगै भएको विषयका कलेज थप्नुको अर्थ के हुन्छ र ? बरु हामीले त यतै भएकाहरुलाई थप बलियो बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने होइन र ?
उताबाट आउने वा विदेशबाट सम्बन्धनको नाममा पनि विद्यार्थीलाई मात्र ठग्ने र यताकाले पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिने हुँदा थप समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ । विदेशी सम्बन्धनको नाममा नेपालमा अभिभावक, विद्यार्थीहरु ढाँटिएका छन्, ठगिएका छन् । तर, सरकारले यसबारे पनि निश्चित नियम बनाउन सकेको छैन । सरकार लाचार बनिदिँदा व्यवसायीहरुले आफ्नो पैसा कमाउने भाँडोको रुपमा कलेज खोलिरहेका छन् । कतिसम्म भने उनीहरुले सम्बन्धन पाएपछि त्यहाँका विश्वविद्यालयलाई तिर्नु पर्ने पैसा पनि यहाँ विद्यार्थीहरुबाट नै उठाइरहेका छन् । आफ्नो सबै खर्च विद्यार्थीको टाउकोमा थोपरेर विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरुले शिक्षालाई थप महङ्गो बनाएका छन्, थप अपारदर्शी बनाएका छन् ।
यस्ता कलेज चलाउनेहरुले राजनीति गर्नेहरुसँग सोझो सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् । त्यही भएर पनि हुनुपर्छ, उनीहरुले गर्न खोजेका कामलाई राजनीति गर्नेले वा पदमा हुनेले पनि निर्धक्क छोडिदिएका छन् । यसले गर्दा उनीहरुलाई अनुगमन गर्ने कोही पनि भएनन् । यस्ता कलेजलाई अनुगमन गरेर कडिकडाउ नगर्ने हो भने केही वर्षमा नै नेपालमा शिक्षाको स्तर निकै खस्किन्छ, यहाँको शिक्षा क्षेत्र बेहाल हुन्छ ।
हो, सम्बन्धन दिएका विश्वविद्यालयहरूले पनि यहाँको गुणस्तरलाई ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरुले पनि पैसा कमाउन पाए पुग्छ भन्ने धारणालाई प्रश्रय दिएको बुझिन्छ । यस्तो किन पनि भने उनीहरुले आफ्नो विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीको संख्या बढाउन पाउँछन् । तर, यता हिजोसम्म हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढिरहेको एक जनाले त्यहाँ पढाउन थाल्छ । सर्टिफिकेटको नाममा विद्यार्थीसँग ती विश्वविद्यालयको डिग्री त होला तर विज्ञता, अनुभव र एउटा विद्यार्थीलाई जे चाहिने हो, त्यो उनीहरुसँग कहिल्यै नहुने भयो ।
देशमा विद्यार्थी ठगिरहेका यस्ता कलेजहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा अहिले व्यापक चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । निश्चित मानक भएका विश्वविद्यालयबाट मात्र नेपालमा सम्बन्धन आउन पाउने, यहाँ हामीसँग नभएका विषय मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था सरकारले जतिसक्दो छिटो गर्न सक्छ । यस्तो भयो भने अहिले देखिएको यो क्षेत्रको विकृति हट्दै जान्छ ।
यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग लिन सकिन्छ । यस्तो भएमा देशमा विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरुले बढाइरहेको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्दै समाधान गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै जस्तो बेवास्ता गर्ने हो भने अहिले स्थिति जस्तो छ, त्यही नै निरन्तर अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प हुँदैन ।
यसरी विदेशी सम्बन्धन लिएका शिक्षण सँस्थाले यो पढाउँछु, त्यो पढाउँछु भनिरहेका छन् । तर, ती सम्बन्धित विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमअनुसार यहाँ पठनपाठन हुन सकेको छ त ?
यसको सहज जवाफ हो, सकेको छैन । त्यसका लागि पढाउने शिक्षकहरुको अवस्था के हो ? कसले पढाइरहेका छन् ? यो प्रश्नमाथि पनि गम्भीर चर्चा हुन जरुरी छ ।
अब नेपालमा विदेशी सम्बन्धनमा पठनपाठन गराइरहेका कतिवटा कलेजले आफ्ना शिक्षकलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पठाएका छन् त ? यो पनि त छैन । यसको अर्थ हो उनीहरुले अहिले गुणस्तरीयतामा कुनै ध्यान दिएका छैनन् । नेपालीले नै पढाउने र अनि त्यो नेपालीलाई पनि कलेजले विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि वा तालिमका लागि नपठाउँदा उसले राम्रोसँग पढाइरहेका छ भन्नका लागि पनि कुनै आधार हुने भएन ।
अर्को कुरा, कोर्ष विदेशी डिग्री भन्ने तर परीक्षा चाहिँ यहाँका कलेजहरुले नै लिने पनि गरेका छन् । अनि उनीहरुले लिने परीक्षा पनि विदेशका विश्वविद्यालयस्तरको हुँदैन । त्यसैले यसरी विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजहरुले गुणस्तरीयतालाई कहिल्यै ध्यान दिएका छैनन्, पैसा कमाउने मात्र उनीहरुको सोच छ, प्राथमिकतामा परेको छ ।
एउटा प्रसंग जोडौँ । कुनै बेला हामीले डेनिस युनिभर्सिटी अफ एजुकेसनसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्झौताअनुसार काम गरेका थियौँ । एमफिल र पिएचडीका कक्षाहरुका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यति बेला त्यहाँका प्रोफेसरहरू यहाँ आएर पढाउँथे, हामी पनि उता गएर पढाउँथ्यौँ । यसले हामीहरुलाई दुई देशका विद्यार्थी, शिक्षाको तौरतरिकाबारे बुझ्न सहयोग गथ्र्यो ।
तर, अहिले विदेशी सम्बन्धनको नाममा सञ्चालकले विद्यार्थीमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने काम मात्र भइरहेको छ । यसले यस्ता शिक्षण संस्थाको औचित्यमाथि, सन्चालकमाथि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
यस्ता कलेजका अरु थुप्रै कमजोरी छन् । यसबारे सरकारले, सरोकार वाला निकायले समयमा नै ध्यान दिओस् ।
(काेइराला नेपालका शिक्षाविद् हुन् ।)
यही विषयका यी समाचार पनि पढ्नुहोस्--
सम्बन्धन लिनै नपाउने लिंकनको सम्बन्धनमा पठनपाठन गराइरहेका छन् यी कलेज​
मन्त्री र उच्च अधिकारीको मिलमतोमा हुँदैन विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजको अनुगमन
विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा छात्रवृत्ति कार्यान्वनयमा समस्या, अन्यौलमा शिक्षा मन्त्रालय
प्रकाशित मिति : कात्तिक २७, २०७८ शनिबार २१:७:५७,